ओलीको अडानले एमाले बिभाजन! – Karnalisandesh
ओलीको अडानले एमाले बिभाजन!
प्रकाशित मितिः २७ बैशाख २०७८, सोमबार ०८:३९ May 10, 2021
ओली पक्षले पदाधिकारी नब्युँताउने, साबिकको स्थायी कमिटी होइन, अहिलेको स्थायी कमिटीमा पदाधिकारी थपिने भएमात्रै कुरा अघि बढ्ने नत्र ओली नमानेको जानकारी गराएपछि संवाद टुटेको स्रोतको दाबी छ। ‘ओलीले चाहे एक मिनेटमा विवाद अन्त्य हुन्छ। उनले नै विवाद मिलाउन चाहेका छैनन्, जसरी पनि पार्टीबाट निष्कासन गर्न खोजेका छन्’, नेपाल निकट एक नेताले भने। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ।